Hiran State - News: Ciidamada Kenya iyo kuwa Azania oo magaalda Kismaayo u jira wax ka yar 50 KM.
Ciidamada Kenya iyo kuwa Azania oo magaalda Kismaayo u jira wax ka yar 50 KM.
HS:-Ciidamada Kenya iyo kuwa Azania oo magaalada Kismaayo aad ugu dhaw kadib markii ay ku guuleysteen iney ciidamo dhigaan guud ahaan jidadii ay Shabaab ku baxsan lahayeen amaba dagaalka ka soo qaadi lahaayeen.
Wararkii ugu danbeyey waxey sheegayaan in ciidmada huwanta ah ay magaalada xeebta ah u jiraan wax ka yar 50 KM iyadoo aan shacabka laga dareemeyn wax cabsi ah oo ay isku diyaarinayaan marka Shabaab iyo ajaaniibtooda ka baxaan meesha la shaqeynayan maamul kasta oo degaankaasi la wareega.
Dagaalka ka socda Jubooyinka ma ahan oo kaliya qorayga la ridayo waxaa daba socda mid siyaasadeed oo lagula xariirayo saraakiil Shabaab ka tirsan oo degaanadaasi ka soo jeeda si ay iyaga iyo hubkooda iskugu soo dhiibaan si nabad ah. warbixinada saacadahii ugu danbeyeey laga helayo magaalada Kismayo ayaa shegaya in dhinaca Bada ay la wareegeen ciidamo Faransiis ah halka hawada guud ee dalka Somaliya la wareegeen dowlada Mareykanka halka dhinaca dhulka ay dagaalkiisa si toos ah ugu jiraan ciidamo ka socda dalka Kenya iyo ciidamo Somali ah oo deegankaasi u dhashay.
Marka dagaalka Jubooyinka laga soo tago waxaa ururka Shabaab dhexdiisa ka taagan qilaaf weyn oo looga soo horjeedo Hasan Daahir Aweys iyo Abuu Mansuur kaasi oo ay shegeen afhayeenka Shabaab Ali Dheere iyo Fu,aad Shanqoole hadalada uu idacadaha ka sii deynayo Hasan Daahir iney xambaarsan yahiin amaba salka ku hayaan dano qabiil taasi oo ay maalintii shaleyto aheyd diideen iney ka soo qeyb galaan banaanbaxii ka dhacay Ceelasha biyaha.
Hadalada dhiilada colaadeed xambaarsan ee Oday Aweys ugu hanjabayo Kenya isagoo argagixiso ah ayey inta badan Somalida sharaxaad ka bixiyeen iyagoo ku tilmaamay hadalka odeyga mid aan ka turjumeyn xitaa danta ururka Shabaab ujeedaduna tahay sidii ciidamada Shabaab ee Jubooyinka loo bur burin lahaa si ay garabkiisa u noqdaan awooda kaliya ee jirta sida laga soo xigtay rag ka ag dhaw Fu,aad Shanqoole iyo Ali dheere.
Sida muuqata Jubooyinka Shabaab iyo Shariif wey isdeyeen waxeyna u badan tahay in halkaas laga hirgaliyo maamul goboleed ku yimid xoog kedibna dadka qasban doona aaqirka sidaasina nabadgalyo leysku haleyn karo ku helaan dadka ka sojeeda Jubooyinka amaba kunool.
· admin on October 28 2011 15:16:13 · 0 Comments · 1837 Reads ·
14,614,718 unique visits